အရပ်ရှည်ချင်လွန်းတာကြောင့် အလွန်နာကျင်တဲ့ဒဏ်ကို (၅) နှစ်ခန့် သည်းခံခဲ့တဲ့ မိန်းကလေး – BaHuTuTa
Sanika Hussain, 25, pictured at her home in Bradford, West Yorkshire, during her recovery from surgery. See SWNS story SWDWARF; A dwarf does not feel short-changed after spending five years of her life in agony undergoingapainful procedure ñ that made her three-and-a-half inches TALLER. Sanika Hussain endured almost 60 months of pain and suffering inabid to reach her dream ñ of being taller than FOUR FOOT SIX. The 25-year-old, who stopped growing at just under 4ft 5ins, is now proudly standing tall atalofty 4ft 8.5ins ñ despite leaving her legs horrendously scarred. Sanika, from Bradford, W. Yorks, endured years of horrific taunts such as ìfreakî and ìmini-meî after being born with dwarfism, before finally being given the go ahead for controversial leg-lengthening procedures in 2010. The painful process, which took more than four years, has left Sanika with dozens of scars on her legs ñ andahuge smile on her face. She said: ìI finally feel comfortable in my own skin.
hypochondroplasia ရောဂါကြောင့် လူတစ်ယောက်ရဲ့ ပုံမှန်အသက်အရွယ်မှာ ရှိသင့်တဲ့အရွယ်အစားနဲ့ အရပ်အမောင်းထက် သေးပုနေတဲ့ဘဝနဲ့ ဖြတ်သန်းနေရတဲ့ Sanika အမည်ရ အမျိုးသမီးတစ်ယောက်ဟာ သူမရဲ့ ရောဂါကိုကုသဖို့အတွက် အလွန်နာကြင်ခဲ့ရမှုကို သည်းခံကာ အလွန်ပြင်းထန်တဲ့ ကုသနည်းအောက်မှာ ငါးနှစ်လောက် အချိန်ကုန်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။ သူမဟာ ကျောင်းနေစဉ်အရွယ်မှာ အရွယ်အစားပုပုသေးသေးလေးမို့ အတန်းဖော်တွေက ‘mini-me’ လို့ ခေါ်ခြင်းကို ခံခဲ့ရပြီး ကျောင်းသွားရမှာတောင် ရှက်ကြောက်ခဲ့ရတယ်လို့ သိရပါတယ်။
သူမဟာ အရပ်ရှည်ဖို့ကို စိတ်အားထက်သန်နေခဲ့ပြီး အတန်းထဲမှာ အချို့မိန်းကလေးတွေဟာ သူမထက် အစပေါင်းများစွာ အရပ်ရှည်နေခဲ့လို့ အရပ်ရှည်ဖို့ဆို ဘာကိုပဲလုပ်ရလုပ်ရလို့ စိတ်ပိုင်းဖြတ်ခဲ့တယ်လို့ သိရပါတယ်။ Sanika ရဲ့ အရပ်ဟာ 3.5 လက်မသာ ရှိပြီး အသက်(19)နှစ်မတိုင်မီကတည်းက hypochondroplasia ဆိုတဲ့ ရောဂါကို ခံစားခဲ့ရပါတယ်။ အဲဒီရောဂါဟာ သာမန်ထက် အရိုးအဆစ်တွေတိုတဲ့ ရောဂါဖြစ်ပါတယ်။ အရပ်ရှည်ဖို့ စိတ်အားထက်သန်နေတဲ့ Sanika ဟာ Leeds General Infirmary က ပါရဂူကြီးနဲ့ တိုင်ပင်ခဲ့ပါတယ်။
ပါရဂူကြီးရဲ့ အဖြေကတော့ ခြေထောက်ရှည်ဖို့အတွက် ခွဲစိပ်ကုသမှု လုပ်ရမှာ ဖြစ်ပြီး ပေါင် 8000 ကုန်ကျမယ်လို့ ဆိုပါတယ်။ Sanika က ” ပါရဂူကြီးဟာ အရပ်ရှည်ဖို့အတွက်ဆိုရင် ခြေထောက်အရိုးတွေကို ချိုးပစ်ဖို့ လိုအပ်ပြီး … အရိုးအစားထိုးခွဲစိပ်ထည့်ရမှာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မတော်တဆမှုနဲ့ အရိုးကျိုးခဲ့သူတွေဟာလည်း ဒီနည်းနဲ့ ကျိုးတဲ့ခြေလက်ဟာ အခြားတစ်ခုထက် ပိုရှည်ခြင်းဖြစ်ကြောင်း၊ ဒီကုသနည်းကို သုံးမယ်ဆိုရင် မခံမရပ်နိုင်အောင် နာကျင်ရမှာဖြစ်ပြီး၊ အိပ်ယာထဲမှာ လဲနေရမှာဖြစ်ကြောင်း အသိပေးခဲ့ပါတယ် … ကျွန်မ အဲဒါကို လုပ်ဖို့ ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ် ” လို့ သူမက ဖွင့်ဟခဲ့ပါတယ်။
သူမဟာ လေးနှစ်ကျော်ငါးနှစ်အတွင်း ခြေထောက်အရိုးကို ချိုးကာ ကြပ်စည်းခဲ့ရတဲ့ ဒဏ်ရာတွေကြောင့် ခြေထောက်အရေပြားပေါ်မှာ အမာရွတ်တွေ၊ အရှိုးရာတွေ ဒါဇင်နဲ့ချီပြီး တင်ကျန်ရစ်ခဲ့ရပါတယ်။ 2010 ခုနှစ် နိုဝင်ဘာလမှာ ရှစ်နာရီကြာ ခွဲစိပ်မှု ခံယူခဲ့ပြီး 2014 ခုနှစ် ဧပြီလမှာ ကြပ်စည်းထားတဲ့ ကိရိယာတွေကို ဖယ်ရှားနိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ဒါကြောင့် သူမရဲ့ ပုံစံဟာ ခြေထောက်တွေက အနည်းငယ် သိသိသာသာ ပိုပြီးရှည်လျှားနေခဲ့ပါတယ်။ အဲဒီအတွက်လည်း သူမက စိတ်ထဲမှာ စနိုးစနောင့် မဖြစ်ဘူးလို့လည်း ဆိုပါတယ်။
သူမဟာ လက်ရှိ သူမရဲ့ အခြေအနေနဲ့ပတ်သက်ပြီး ကျေနပ်လျှက် ရှိကာ ခံစားချက်ကိုလည်း ထုတ်ဖော်ခဲ့ပါတယ်။ သူမက ” အခုအချိန်မှာတော့ ကျွန်မ အွန်လိုင်းပေါ်မှာ ကောင်လေးတစ်ယောက်ယောက်နဲ့ချိန်းတွေဖို့ အဆင်သင့်ဖြစ်နေပါပြီ … ကျွန်မဘဝမှာတော့ ဒီအဖြစ်အပျက်ဟာ အကောင်းဆုံးပါဘဲ …တစ်နေ့နေ့မှာ ကျွန်မလည်း တစ်ခြားအမျိုးသမီးတွေလို ဒေါက်မြင့်ဖိနပ် လှလှလေး ဝတ်ဆင်နိုင်မှာပါ ” လို့ ဆိုခဲ့ပါတယ်။